Imoto Chevrolet Aveo hatchback kuyinto Umkhuba omusha ethembisa kakhulu leqembu in the izimoto ikilasi kahle. Kodwa njengoba wazi, konke entsha kahle ukhohlwe ubudala, futhi lesi imodeli has a eyandulela ngokuthi Daewoo Kalos. Kuyinto ngenxa yalesi simo futhi bahlakulele brand Chevrolet Aveo. Ukuze amaKristu adumise abaklami, mangisho ukuthi kusukela imoto endala cishe akukho okuseleyo emehlweni enkosi, zonke izinto ngaphansi sesimanje obuphelele, futhi baningi abangena entsha ngokuphelele futhi ongakayisebenzisi.
Umqondo imoto entsha ihlanganisa wabuka stylish lomzimba ngesikhathi esifanayo usizo ingaphakathi, lapha ungeze ukonga injini ukusebenza futhi ezingabizi intengo ezingeni. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka ethandwa Chevrolet Aveo hatchback okuyinto yokuthengisa kusukela ekuqaleni zokukhiqiza Kancani-kancani ikhula - lobu ubufakazi osobala kakhulu yokuthi umshini kuhlulekile. New Chevrolet Aveo hatchback inezidingo design umzimba layo eliyingqayizivele. Lona yasekuqaleni umzimba wabuka izibani ezingemuva futhi ububanzi, njengoba uma ezimbili storey Izinsimbi phambi, okuyinto ngokuqinisekile enikeza ukubonakala umshini ezinye ulaka stylish. Ingaphakathi imoto Kwakukhona izakhi fashion design manje "ngaphansi version ezemidlalo." Ethonya, uma ufunda izibuyekezo Chevrolet Aveo hatchback, ukhiqiza omkhulu kudeshibhodi, zalungisa nge metal, lapho ngezinto zokudlala umculo ngokwazo pritopleny e emithonjeni ejulile futhi akhanyisa zonke abomvu amnyama. Nokho, hambisa original kakhulu, unezela umshini amaphuzu uma ziqhathaniswa izimbangi.
Endaweni ehlukile, kufanele ishiwo injini entsha, okuyinto ithole Chevrolet Aveo hatchback. Basic ukucushwa injini has umthamo ofanayo nangaphambilini omi Daewoo Kalos, ivolumu usebenza 1 no-2 lonke okweshumi (1.2) amalitha. nezindaba Kodwa kwadingeka 84 amahhashi esikhundleni owedlule 72-Hoo. Lokhu ibangelwa kuhlanganise ngokusebenzisa 4 valve per cylinder design esikhundleni amabili. Ngakho, injini entsha ijoyina eziningi ethembisa shestnadtsatiklapannyh amandla izitshalo nge umjovo fuel, okuyinto ziyehluka akugcinanga ngokwandisa rwe ukuzinikezela embili ezinhle kodwa futhi uvumelana nayo yonke amazinga elawula for kwekhabhoni. Kulokhu, labo abanikazi imoto asebethole ukuze asizakale ngalesi imoto akuyona onyakeni wokuqala, cishe injini uthola impendulo Chevrolet Aveo hatchback njengoba iyunithi enokwethenjelwa kakhulu futhi ukonga. Phela, lokhu iyahlule VAZOVSKY 16 valve imiklamo okuyizinto namanje emanzi. ezisemadolobheni umjikelezo petrol esiphakathi 5.5 kuya 6 amalitha, endaweni njalo kukhasa up intengo uphethiloli akunjalo malovazhno.K ukucushwa eziyisisekelo ukudluliswa unamathele isivele abe pyatistupka zakudala lokukhanda. Kukhona nguqulo ye amandla injini 1 lonke futhi 4 eshumini (1.4) amalitha, okuye ekhishwe "amahhashi" 98 qinile kungenzeka ukukhetha isethi ephelele ezishintshayo ngezinyathelo ezine .. Yiqiniso, ukusetshenziswa kukawoyela isivele Pobol, kodwa imoto uqobo kakhulu ashukumisayo. Ukuze abalandeli ukuze babe namandla nezelani injini imoto ukhetho ezifanele kakhulu. Carmaker Chevrolet emakethe eRussia akuyona neminyaka yokuqala eyishumi futhi phakathi naleso sikhathi ithole umdayisi inethiwekhi esikhulu kakhulu cishe kuzo zonke kancane kancane edolobheni elikhulu. Ngakho-ke, uthenga hatchback Chevrolet Aveo akuyona inkinga.
Uma ungenalo ugijimele ungakhetha, ungasinda ngisho paribus ceteris uthenga hatchback Chevrolet Aveo nge isaphulelo omuhle ukwabelana ukuthi ukukhuthalele kwenziwe inethiwekhi nomthengisi. Izindaba ezimnandi naye yokuthi wabenza kakhulu Ungathenga lokhu imoto uhlelo eziklanyelwe loan.
Vaz-21124 - imoto asebenzayo abantu umoya
Brake pad esikhundleni "Ford Focus 2". Themba imoto yakho kuphela ochwepheshe
Ukungasebenzi Clutch. izinkinga Clutch - okulahlekile, umsindo futhi amahlumela
Drilling izimbobo ukhonkolo: nezinto ezidingekayo kanye nobuchwepheshe
Ukwahlukanisa, izimpawu kanye nokwelashwa cystitis kwabesifazane
"Umshayeli" - ama-tattoos for the brave
Sharov Aleksandr Izrailevich, umlobi yesayensi: Biography, lokusungula
"Dubrovka" emakethe. "Dubrovka" (imakethe) - sokusebenza. "Dubrovka" (imakethe) - ikheli
"Inglot" - izimonyo ochwepheshe hhayi kuphela
Mycology - ke ukuthi isayensi?
Ikhanda lokubheka izinwele ezinde kumntwana. Izinhlobonhlobo zezinwele zezinsuku zokugubha kanye nezansuku zonke